'शेयर बजारको बढ्दो कारोबारमा सूक्ष्म अध्ययन हुँदै छ'
अन्तर्वार्ता पुँजी बजार
भागवत भट्टराई काठमाडौं, १८ फागुन
पछिल्लो ६ कारोबार दिनमा सेयर बजारमा करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ । १ महिना अघिसम्म दैनिक ५० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेकामा अहिले दैनिक कारोबार रकम ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्न थालेको छ ।
गत साताको चौथो दिन अहिलेसम्मकै उच्च कारोबार ४ अर्ब १५ करोड पुगेकामा बिहीबार त्यसलाई तोड्दै ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुग्यो । यस साताको पहिलो दिन आइतबार ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ माथि लागेको छ ।
कारोबार रकम उच्च अंकले बढे पनि सूचकाङ्कमा भने केही सुधार देखिएको छ । पछिल्लो ६ कारोबार दिनमा २ दिन ह्रास र ४ चार दिन उच्च अंकको वृद्धि देखियो । पुँजी बजारको इतिहासमा सेयर बजार सूचकाङ्क अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी १२ साउन २०७३ मा १ हजार ८ सय ८९ अंकमा पुगेको थियो । यसबीचमा करिब ११ सय अंकमा झरेको नेप्से आइतबारसम्म १५ सय ९१ मा रहेको छ ।
तर, कारोबार रकम भने दिनदिनै बढ्दै गएको छ । सेयर बजारमा देखिएको विस्तार र बजारमा आएको यति ठूलो रकमको सवालमा पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीसँग शिलापत्रडटकमका लागि भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी :
पछिल्लो दिनको सेयर बजार कारोबारलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सेयर बजारमा अहिले लगानीकर्ताको विश्‍वास बढेको देखिएको छ । सूचकाङ्क तलमाथि जानु बजारको नियम हो । आगामी वर्ष राम्रो हुन्छ, कम्पनीहरूले राम्रो गर्छ भन्ने विश्‍वास बढ्यो भने लगानीकर्ताको सेयर माग बढी हुन्छ र सूचकाङ्क बढ्ने गर्छ । अहिले विश्‍वास बढेको देखिएको छ तर हामीले न्यूनत्तम सिद्धान्त भने बिर्सनुहुँदैन । कम्पनीहरूको काम कस्तो छ, त्रैमासिक रिपोर्ट कस्तो आएको छ, यी विषयलाई भने हेर्नै पर्छ ।
पछिल्लो दिन कारोबार रकम निकै बढेको छ, १ महिनाअघि १ सातामा हुने कारोबार अहिले एकै दिनमा भएको छ, यति ठूलो रकम बजारमा कसरी आयो ?
हामीले सेयर बजार विस्तारको आवश्‍यकता महसुस गरेको हो । सेयर बजार कति विस्तार भइरहेको छ भन्ने कुरा कारोबार रकमले देखाउने पनि हो । अहिले कारोबार रकम निकै बढिरहेको छ तर २०-२२ दिनअघिसम्म दैनिक ५०-६० करोडको कारोबार हुने गरेकामा अहिले कारोबार निकै उच्च हो । यस विषयमा हामीले पनि सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छौँ ।
हाम्रो सुपरभिजन विभागबाट यो अध्ययन अहिले भइरहेको छ । अन्य निकायले पनि गरिरहेका छन् होला- यति ठूलो रकम कसरी, कहाँबाट आयो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ, यो स्वाभाविक पनि हो । हामी अध्ययनपछि बोल्न सक्छौँ ।
बोर्डले सेयर कारोबार काठमाडौंबाहिर पनि लगेको छ, यसको प्रभाव हुन सक्छ ?
हो, कारोबार रकमले बजार विस्तार भएको देखिन्छ तर कहाँबाट कति कारोबार भएको छ, यो अध्ययनको कुरा हो । हिजो हामीले सेयर बजारको दायरा कम भयो, काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित भयो भनेर काठमाडौंबाहिर पनि बजार विस्तार गरिएको हो । बजार विस्तार गर्नका लागि हामीले आस्बा प्रणाली पनि लागू गरेका छौँ । लगानीकर्ताको चासो यसमा निकै बढेको छ ।
लामो समय सरकार र बोर्डले लगानीकर्ताको आलोचना खेप्नुपर्‍यो, बजार निकै घट्यो । त्यसपछि सुधारका लागि भन्दै ५८ बुँदे सुधारका योजना पनि ल्याइयो । अहिले समग्रमा बजार सुधारमा छ । यो कामको परिणाम हो त ?
५८ बुँदे सुधारका योजनामा त्यहाँ भएका धेरै बुँदा कार्यान्वयनमा आएका छन् । त्यहाँ धेरै निकायले गर्ने काम छन् । नेप्सेका तर्फबाट, बोर्डका तर्फबाट राष्ट्र बैंकका तर्फबाट र अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पनि छन् । समग्रमा हेर्ने हो भने ९० प्रतिशत काम भएको छ । यसको अवसर पनि बजारमा आएको हो । हाम्रो नियमावली संशोधन भएका कारण लगानीकर्ताको दृष्टिमा फरक परेको छ ।
आइतबार ह्रास आएर पनि पछिल्लो २ सातामा नेप्से करिब २०० अंकले उकालो लागेको छ, के यो स्वाभाविक हो ?
अहिले बजार राम्रै ढंगले उकालो लागेको छ तर यसबीचमा ११ सयको हाराहारीमा पुनि पुग्यो । यो एउटा चक्र हो । घट्ने सकिएपछि बढ्नेतर्फ र बढ्ने सकिएपछि घट्नेतर्फ घुम्छ । करिव साढे २ वर्ष ह्रास आयो, अहिले समग्रमा बढेको देखिएको छ । हामीले वित्तीय साक्षरता गराउने क्रममा पनि हामीले भन्ने के हो भने बढ्दैबढ्दै बजारमा पस्नेभन्दा घटेको बेला पस्नेहरूले बढी नाफा कमाउने गरेका हुन्छन् तर यसै नै गर्नु भन्नचाहिँ भनिँदैन ।
बढ्नु घट्नु चक्र हो त भनियो तर कतिपय ठूला लगानीकर्ताहरूले ४५ सय माथि पुग्छ सेयर बजार भनेर आफ्नो विचार राखेका हुन्छन् । यसको प्रभाव बजारमा पर्दैन ?
कसैले ४५ सय पुग्छ भनेको आधारमा लगानी गर्ने होइन । हो, विश्लेषण सुन्नुपर्छ के आधारमा गरिएको हो, हेर्न सक्नुपर्छ । तर लगानीकर्ताले आफ्नो जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता कति हो, कम्पनीको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा हेरेर लगानी गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १८, २०७६, ०५:१५:००
कोरोनाका कारण ४० प्रतिशत वैदेशिक राेजगारीकाे कोटा कटौती हुन्छ
१६ चैतको सरकारी निर्णय : सरकारी संस्थाले सुनेनन्, निजीले मानेनन्
भोलिबाट पर्यटक ओसार्न रोक, लकडाउन अवधिमा जाे जहाँ छ त्यहीँ बस्नुपर्ने
स्रोत खुम्चिएपछि खर्च घटाउँदै सरकार, यी शीर्षकमा पाइनेछैन बजेट खर्चिन